Dowladda Kenya oo Sheegtay in La Dilay Xubno Ka Tirsanaa Xarakadda Al-shabaab – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Ciidamadda ammaanka ee dalka Kenya ayaa sheegay inay dileen seddex dagaalyahan oo ka tirsanaa Al Shabab kadib markii ay police-ku ogaadeen in dagaalyahanadaas qarax ay ku aasayaan waddada dhinaceeda.
Falkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Kiunga oo ka tirsan Magaalada Lamu oo ku taallo soohdinta ay wadaagaan dalalka Somalia iyo Kenya, waxa ayna police-ku sheegeen in laba kamid ah askarta police-ka uu dhaawac soo gaaray.
David Lusava, oo ah taliye ku-xigeenka police ka ee magaalo xeebeedka Lamu ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in qaraxaas la qorsheynayey in lala beegsado ciidamada ammaanka ee saldhigyada ku leh deegaanka.
“Waxaan helnay xogta weerarkan qaraxa ah ee lala maagan yahay meelo kamid ah Kiunga oo xad laleh Somalia balse ma bixin karo faahfaahin intaas ka badan. Xitaa ma sheegi karo imisa ayaa ku dhimatay ama ku dhaawacantay weerarka iyo inay ahaayeen argagixiso ama saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka,” ayuu yiri Lusava.
Sarkaal ka tirsan police-ka Kiunga ayaa xaqiijiyey in la dilay seddex dagaalyahan oo ka tirsan intii uu socday howlgalka, waxa uuna sheegay in ragaas ay ku labisnaayeen dress ay ku xardhan tahay astaanta Al Shabab.
Sarkaalku waxa uu sheegay in dagaalyanadan ay gaarayeen ku dhawaad 30 dagaalame islamarkaana ay qorsheynayaan inay weeraro geystaan.
Police ka Kenya ayaa aaminsan in dagaalyahanno ka tirsan Al Shabab ay ku sugan yihiin gudaha Kenya islamarkaana ay qatar ku yihiin amaanka Dalka Kenya.